म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो
म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो
म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापनजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो ।
मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ ।
साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेरो मनमा एउटा विचार आयो । उत विचार मैले मेरो घरमा बा आमालाइ पनि भने, र बा आमाबाट पनि त्यो कुरा लाई स्विकार गर्नुभयो ।
मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएको २२ बर्ष नाघेको केटा पनि खोजे तर भने जस्तो पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर आए ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारामा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु ।
त्यस कारणा आज मैले राम्रो असल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जान कारी गराएको छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । भन्ने विश्वासलागेको छ।
यदि तपाइमा मैले भने जस्तो गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहोला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुरोध सबैमा गर्दछु । मैले आज सम्म आइपुग्दा धेरै दुखहरू भोगेको हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालको केटा चाहिएको हो । मेरो हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म सँगै सधै वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएको हुनु पर्नेछ ।
यस कारणा पनि मैले त्यस्सतो खालको केटा खोजेको हो । आजकाल यस्ता खालका फेसबुक पोष्ट, पत्रिकामा विज्ञापन भेटिन्छन् । त्यही विवरण यहाँ पेस गरेका हौँ ।यस्ता बिज्ञापन धेरै आउने हुँदा जापान जान चाहानाहुने राम्रो सङ बुजेर मात्र अघि प्रक्रिया चाल्नुहोला ।
रुपन्देही घटनाः सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल ब’म प्र’हार, एसपी सहित ४९ सुरक्षाकर्मी घा’इ,ते
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस् ! बिल्कुलै इन्कार नगर्नुहोला ,ॐ ॐॐ
म तिमीसँग बस्दिनँ, मलाई डिभोर्स देऊ ……..!
पुस १५ गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको गृहमन्त्रालयको घोषणा !